आईफोन J जेट व्हाइट सनी डिक्सन भिडियो मा चित्रित आईफोन समाचार
आईफोन J जेट व्हाइट सनी डिक्सन भिडियो मा चित्रित
कुनै श doubt्का बिना, २०१ 2016 मा सुरू गरिएको सबैभन्दा सफल र the्ग आईफोन J जेट कालो वा चमकदार ब्ल्याकको थियो। नयाँ कालो, एप्पलको अनुसार पत्ता लगाउन गाह्रो, शुरुदेखि नै विशेष चीजको रूपमा व्यवहार गरिएको छ, बक्सको रंगबाट शुरू गरेर र यसलाई किन्नुपर्दा हामीले कम्तिमा १२7 जीबीको मोडेल छनौट गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको अन्तमा। जेट ब्ल्याक मोडलको ब्राइटनेससँग यसका लागि धेरै कुरा भएको थियो, एप्पललाई यो थाहा छ र अफवाहहरू भन्छन् कि एक आईफोन J जेट व्हाइट वा उज्यालो सेतो।
यो MacOtakara थियो, एक माध्यम हो जसले धेरै एप्पल योजनाहरू अघि र सही रूपमा लीक गरेको छ, जसले एप्पलले आईफोन,, जेट व्हाइट वा उज्यालो सेतो ठीक हुनको लागि छैठौं रंग सुरू गर्ने सम्भावनाको बारेमा बोले। यो अफवाह नोभेम्बरमा प्रसारित हुन शुरू भयो, तर त्यस समयमा कुनै फोटोहरू साथ गरिएको थिएन। आज, डिसेम्बर २7र पवित्र Innocents दिन, सोनी डिक्सनले एक भिडियो पोस्ट गर्नुभयो seconds सेकेन्डको जुन आईफोन6जेट ब्ल्याकका दुबै मोडेलहरू देखाउन सक्दछ।
के ती दुबै मोडेलहरू आईफोन J जेट व्हाइटको हो?
यो जेट व्हाइट आईफोन7हुन सक्छ? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON
- सोनी डिक्सन (@ सोनी डिक्सन) डिसेम्बर 27, 2016
सोनी डिक्सन द्वारा प्रकाशित भिडियो मा हामी देख्न सक्छौं कि उनीहरु को हुनु पर्छ दुई हौसिings, एक आईफोन from बाट र एक आईफोन from बाट, उज्यालो सेतोमा। यद्यपि यो सत्य हो कि यी केसहरूमा अझै पनि सबै प्रकारका हेरफेरहरू भोग्नुपर्दछ, त्यहाँ एउटा विवरण छ जुन ध्यान आकर्षित गर्दछ: प्लस मोडेलको मामलामा एप्पल लोगो छ, जबकि7इन्चको आईफोन of को मामलामा छैन। यसको अर्थ दुई चीज हुन सक्छ: पहिलो यो हो कि तपाईंहरू धेरैले सोच्दै हुनुहुन्छ, कि हामीले भिडियोमा जे देख्छौं त्यो नक्कली हो। अर्को विकल्प यो छ कि आईफोन Plus प्लस केस सामान्य मोडेल भन्दा एक कदम अधिक पार गरीरहेको छ जुन एप्पल लोगोमा कोरिएको छ।
मकोटकारा, अब डिक्सन जस्तै, कहिले भनिए कि यी मोडेलहरू कहिले रिलीज हुन्छन् आईफोन glo चमकदार खाली। वास्तवमा उनले भनेका थिए, कथित रूपमा आपूर्ति चेनबाट प्राप्त गरिएको जानकारी एकदम विश्वसनीय छैन। यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि म यो पनि एकै कुराका लागि नक्कली भन्छु: नयाँ र color्ग सुरू गर्न र भर्खरको आईफोन मोडेलको बिक्री बढाउन क्रिसमसभन्दा उत्तम समय के हो? यद्यपि त्यहाँ अर्को राम्रो पल हुन सक्छ: वसन्त जहाँ एप्पलको स्मार्टफोन बिक्री घट्न थाल्छ, यही कारणले आईफोन एसई मार्चको अन्तमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तिम्रो बिचार के छ? के यी जेट व्हाइट आईफोन cases केसहरू वास्तविक छन् वा नक्कली?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » आईफोन J जेट व्हाइट सनी डिक्सन भिडियो मा चित्रित
हेक्टर म्यागाना भन्यो
नमस्कार! म पेरिसमा बस्छु, र म Apple एप्पल स्टोरहरूको ग्राहक थिएँ र म पुष्टि गर्न सक्दछु कि तीन स्टोरहरूमा सेवा फोहर छ! पूर्णरूपमा दुर्भाग्यपूर्ण छ कि एक ब्रान्ड जसले प्रविधिको बिक्री र बिक्रीमा बेच्न सेवामा निकै नराम्रो छ, मैले मेरो आईफोन S एसको ब्याट्री परिवर्तन गर्न खोजेको छु र आज सम्म म यो गर्न सकेको छैन, यो मलाई बढि स्पष्ट छ कि एप्पलले अधिकतम यसको बिन्दुमा पुगेको छ र उत्पाद गुणवत्ता र सेवा दुबै फ्रि गिरावटमा आउँदछ, त्यसैले यो नयाँ विकल्पहरू खोज्न सुरु गर्ने समय हो ...
म तपाईंसँग साझेदारी गरेर मेरो टिप्पणी समाप्त गर्दछु, कि एप्पलले मेरो सम्पर्कमा समस्या समाधान गर्न सक्षम हुन बिना नै सम्पर्क गरेको छ जुन मेरो विचारमा सरल छ ... तर तिनीहरूलाई बुझ्न कठिन छ कि उनीहरूका उत्पादनहरू सस्तो छैनन्, तिनीहरू यति खराब छन् गुणस्तर र सेवा
हेक्टर म्यागानालाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले जर्मनीमा एप्पल स्टोरबाट बैंक स्थानान्तरण भुक्तानी विकल्प हटाउँछ
एप्पलले गल्तीले दुई सहि एयरपडहरू हजारौं प्रयोगकर्तालाई पठाउँदछ